Inhlangano yamanyuvesi ithi ngeke ibavumele abangazifakanga izicelo | News24
Inhlangano yamanyuvesi ithi ngeke ibavumele abangazifakanga izicelo
Johannesburg – I-Universities South Africa (USAf) ithi ikhathazekile kakhulu ngesimemo esenziwa abanye abaholi bepolitiki ngokuthi abafuna ukufunda kumele bavele baqonde emanyuvesi bayobhalisa nakuba bengazange bafake izicelo.
I-USAf ithi amanyuvesi ngeke abamukele labo azofika bezofaka izicelo zokufunda kanti abafuna ukuyofunda kumele baqale ngokuthumela imininingwane yabo ezindaweni ezifana nakwi-CAO ukuze batholelwe izikhala.
Ngempelasonto, umholi we-Economic Freedom Fighters (EFF) uJulius Malema ugqugquzele abantu ukuba baye emanyuvesi abawathandayo.
OLUNYE UDABA: Kushone ababili beshaywa umbani eKZN
Ukusho lokhu ngemuva kokuba uMengameli Jacob Zuma emangaze abaningi ngenyanga edlule ememezela ukuthi uhulumeni uzosiza abanye babafundi ngezimali zokufunda.
I-USAf ihlangane noMnyango wezeMfundo kanye ne-NSFAS ukudingida lesi simemezelo.
USolwazi Ahmed Bawa we-USAf uthi lokhu kuzoba yingozi enkulu kumanyuvesi futhi badinga isikhathi ukubona ukuthi lolu hlelo luzosebenza kanjani.